IMcFIT - ilogo entsha, isithombe esisha > UVielhuber David
IMcFIT - ilogo entsha, isithombe esisha06
Iketango lokuqina lomzimba wesaphulelo uMcFIT uzinikeze ukwakheka okungcono. Ngenkathi imascot ephuzi ephuzi eyibhanana yayihlobise uhlaka oluhlaza okwesibhakabhaka, umnsalo ophuzi onemvelaphi enombala we-anthracite manje ulengiswe ngobuchule futhi ngaleyo ndlela wakhe isakhiwo esingaqondakali. Imibala ye-FDP eluhlaza okwesibhakabhaka nephuzi ayiniki uphawu lwe-logo kuphela, kodwa nayo yonke enye into yokuphrinta yomkhiqizo kaMcFIT.
Ngiyangabaza ukuthi ukuzibandakanya kwami ​​okuzenzakalelayo namathawula kuhloswe yini ngabadali be-ejensi ye- syndicate . Noma kunjalo, ngibona ilogo njengesinyathelo esinesibindi. Okungaqondakali kuyathandeka nje. Ukuthi konke okucatshangelwe nakho kungabonakala ekuguquleni isipelingi kusuka ku- "McFit" kuye ku- "McFIT" - mhlawumbe ukubeka ilogo endaweni ebanzi.
Iketanga lokuqina ngokuvamile lifuna ukusuka kokungabizi kuya esithombeni se-premium - ngokuhambisana nokunikezwa kokuqeqeshwa kokuhlangenwe nakho okusha kweMcFIT . Ngaphezu kobunikazi benkampani obuphelele, intengo ibuye yashintshwa futhi yanda ngo- € 3.00 ngobusuku obubodwa. Ngemuva kwakho konke, manje usungageza mahhala.
Okunye okufanele kushiwo ngumkhankaso omusha we-Twitter - lapho kwenzeka iphutha elincane kodwa elikhulu eqenjini lokumaketha. I-hashtag #derwilleindir yethulwe kumaphosta ahlukahlukene anezikhala (mhlawumbe ukuze kufundeke kangcono). Inkinga: Manje sekunama-tweets amaningi futhi ane-hashtag #der . Ukuhlazeka kanjani.
Umkhankaso omusha we-Twitter